Gudoomiyaha Baraawe “Shabaab Waxay Xasuuqeen 16 Qof Oo Isku Qabiil Ah” – Great Banaadir
Gudoomiyaha Baraawe “Shabaab Waxay Xasuuqeen 16 Qof Oo Isku Qabiil Ah”
BARAAWE – Gudoomiyaha Degmada Baraawe ee Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, Cumar Sheekh Cabdi Shafaana ayaa Ururka Al Shabaab ku eedeeyay inay siyaabooyin kala duwan Fagaare ugu toogteen 16 qof oo isku Heyb ahaa.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Xukuno aan Sharci ahayn ay Shabaabku ku fuliyeen Dad u dhashay buu yiri Deegaanka, Xilli sideed kamid ah sida uu sheegay ay ku toogteen Deegaanka Kuunya Barrow oo hoos-tagga Degmada Baraawe.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in Dadkan ay kamid ahaayeen Dad ay Shabaabku siyaabooyin kala duwan Toddobaadkii Hore ugu toogteen Fagaareyaal ku kala yaala Saakow, Jilib, Buulo Fulaay iyo Kuunyo Barrow.
“Xasuuqa waxaa loo gaystay Shacabkayaga aan anaga Masuulka ka ahayn, oo Dadka Deegaanka u dhashay ah, weliba ahaa Dadkii Deegaanka ee la yaqaanay. Dhimashada waxay sii mareysaa illaa iyo 16 Qof. Waa hal Qabiil dadka ay Xasuuqa u gaysteen.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Degmada Baraawe.
Gudoomiyaha oo la hadlay VOA-da ayaa yiri “Shabaabka Dhibaato badan ayay Dadka Shacabka ah ku hayaan, Xoolahooda inta ay dhacaan ayay weliba Dil ugu sii dareen. Fagaare cad ayay Dadka ku dilayaan.”
Cumar Sheekh Cabdi Shafaana, Gudoomiyaha Degmada Baraawe ayaa xusay in Shabaabku ay Dadkaasi u dileen, iyagoo ku eedeynaya Basaasnimo.
“Waxay leeyihiin Nimankan waa Basaas, Niman Maanta Afka Soomaaliga aan aqoon ayay leeyihiin Mareykanka ayay la hadlayeen. Ayuu yiri Gudoomiyaha oo intaa ku daray “Anaga Dadka Shacabka ah ee la gumaadayo runtii marnaba raali ugama noqoneyno, Shacabka la gumaadayo waa Shacabkayagii aan anaga Masuulka ka nahay. Teeda kale mar walba waxay leeyihiin Basaasnimaa ku dileynaa, Mareykan ayay la hadlayaan. Dadka Af Soomaaliga aqoon haddii Mareykan la hadli lahaayeen waaba iska fiicnaan laheyd, waa Sirdoon CID-da Mareykanka waaye iyo Barnaamijyo noocaas ah ayay Dadka ku dileen.”
Shabaabka ayaa Maalmihii Axadda, Isniinta, Talaadada iyo Arbacadii waxay Xukun Dil ah ku fuliyeen Afar iyo Labaatan Qof oo midi ay Haweeney ahayd, iyagoona dhammaantood ku eedeeyay Falal Basaasnimo.
Xigasho: Universal TV Somali
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Xaflada Qalin-jebinta Kala Qeyb-galay Dufcadii 20aad Ee Jaamacada Camuud Oo Ay Ka Baxeen 995 Arday
Safiiradda UK Oo Wadahadal La Xiriira Arrimaha Doorashada La Yeelatay Midowga Musharixiinta
U.S. soldier accused of wanting to plot ISIS strike on 9/11 Memorial in New York City